सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्न बनेको विधेयकमा के छ? - खबरमञ्च खबरमञ्च
३ फागुन, खबरमञ्च, at 4:32 PM
By खबर मञ्च / February 15, 2019 / Comments Off on सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्न बनेको विधेयकमा के छ?
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले आलोचना सुन्ने संस्कृति बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । यस्तो कार्यले समाजमा भय सिर्जना हुने उहाँको तर्क छ ।
त्यसैगरी अधिवक्ता अस्मिता पोखरेलले गोपनियताको अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न पहिले नै गोपनियतासम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा फेरि सोही सम्बन्धी प्रावधान यस कानूनमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । कानून मस्यौदा कर्ताले पुरानो कानून नहेरी दुई वा सो भन्दा बढी ऐनमा एकै किसिमको कानूनी प्रावधान राख्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
Published:3months ago on February 15, 2019
Last Modified: February 16, 2019 @ 5:12 pm
पत्रकारका लागि झन कडा कानून ल्याउँदै सरकार, १ कराेड जरिवानादेखि पन्ध्र वर्ष कैदसम्म